2 “Anyị wee tụgharịa, kwaliekwa soro ụzọ gara Oké Osimiri Uhie gawa n’ala ịkpa, dị nnọọ ka Jehova gwara m;+ o wekwara anyị ọtụtụ ụbọchị ịga Ugwu Sia gburugburu.
2 N’ikpeazụ, Jehova gwara m, sị,
3 ‘Oge unu gara ugwu a gburugburu ezuwo.+ Tụgharịanụ chee ihu n’ebe ugwu.
4 Nyekwa ndị Izrel iwu, sị: “Unu na-agabiga n’ókèala ụmụnne unu,+ bụ́ ụmụ Isọ,+ ndị bi na Sia;+ egwu ga-ejidekwa ha n’ihi unu,+ kpacharanụ nnọọ anya.
5 Unu alụsola ha ọgụ, n’ihi na agaghị m enye unu ala ha, ọbụnadị otu ọbụ ụkwụ; n’ihi na enyewo m Isọ Ugwu Sia ka ọ bụrụ ihe nketa ya.+
6 Ihe oriri ọ bụla unu pụrụ iji ego zụta n’aka ha ka unu ga-eri; mmiri ọ bụla unu pụkwara iji ego zụta n’aka ha ka unu ga-aṅụ.+
7 N’ihi na Jehova bụ́ Chineke gị agọziwo gị n’ihe niile aka gị na-eme.+ Ọ maara nke ọma banyere njegharị ị na-ejegharị ná nnukwu ala ịkpa a. Jehova bụ́ Chineke gị nọnyeere gị afọ iri anọ ndị a.+ Ọ dịghị ihe kọrọ gị.”’+
8 Anyị wee si n’ebe ụmụnne anyị nọ, bụ́ ụmụ Isọ,+ ndị bi na Sia, n’ụzọ Araba,+ Ilat nakwa Iziọn-giba,+ gafere.
“Anyị tụgharịkwara soro ụzọ ala ịkpa Moab.+
9 Jehova wee sị m, ‘Esogbula Moab, ebusokwala ha agha, n’ihi na agaghị m enye gị ala ya ọ bụla ka ọ bụrụ ihe nketa gị, n’ihi na ọ bụ ụmụ Lọt+ ka m nyere Aa+ ka ọ bụrụ ihe nketa ha.
10 (Ndị Imim+ bi na ya n’oge gboo. Ha dị ike ma dị ọtụtụ, tookwa ogologo dị ka ụmụ Enak.+
11 A na-ewerekwa ndị Refeyim+ dị ka ụmụ Enak,+ ndị Moab na-akpọ ha Imim.
12 Ndị Horaịt+ biri na Sia n’oge gboo, ụmụ Isọ+ napụkwara ha ala ha ma laa ha n’iyi n’ihu ha wee bichie ha,+ dị nnọọ ka Izrel ga-eme ala nke bụ́ ihe nketa ya, nke Jehova ga-enye ha.)
13 Ugbu a, bilienụ gafere iyi ndagwurugwu Zired.’ N’ihi ya, anyị gafere iyi ndagwurugwu Zired.+
14 Oge anyị jere ije malite na Kedesh-bania ruo mgbe anyị gafere iyi ndagwurugwu Zired dị afọ iri atọ na asatọ, ruo mgbe ọgbọ ahụ dum bụ́ ndị ikom na-aga agha nwụchara n’etiti ndị Izrel, dị nnọọ ka Jehova ṅụụrụ ha iyi.+
15 Jehova wee bie ha aka+ iji were ọgba aghara kpochapụ ha n’etiti ndị Izrel, ruo mgbe ha nwụchara.+
16 “O wee ruo na ozugbo ndị ikom ahụ niile na-aga agha nwụchara n’etiti ndị Izrel,+
17 Jehova gwara m okwu ọzọ, sị,
18 ‘Unu ga-esi n’ókèala Moab, ya bụ, Aa,+ gafere taa,
19 ị ga-erukwa nso n’ebe chere ihu n’ala ụmụ Amọn. Esogbula ha, alụsokwala ha ọgụ, n’ihi na agaghị m enye gị nke ọ bụla n’ime ala ụmụ Amọn ka ọ bụrụ ihe nketa gị, n’ihi na ọ bụ ụmụ Lọt ka m nyere ya ka ọ bụrụ ihe nketa ha.+
20 A na-ewerekwa ya dị ka ala ndị Refeyim.+ (Ndị Refeyim bi na ya n’oge gboo, ụmụ Amọn na-akpọkwa ha Zamzọmim.
21 Ha bụ ndị dị ike ma dị ọtụtụ, tookwa ogologo dị ka ụmụ Enak;+ Jehova wee laa ha n’iyi+ n’ihu ha, ka ha wee napụ ha ala ha ma bichie ha;
22 dị nnọọ ka o meere ụmụ Isọ, bụ́ ndị bi na Sia,+ mgbe ọ lara ndị Horaịt+ n’iyi n’ihu ha, ka ha wee napụ ha ala ha ma bichie ha ruo taa.
23 Ma ndị Avim,+ bụ́ ndị bi n’obodo nta dị iche iche ruo Geza,+ ka ndị Kaftọrim,+ bụ́ ndị si na Kaftọ+ pụta, lara n’iyi, ka ha wee bichie ha.)
24 “‘Bilienụ, kwalienụ gafee iyi ndagwurugwu Anọn.+ Lee, enyefewo m Saịhọn+ eze Heshbọn, bụ́ onye Amọraịt, n’aka gị. Ya mere, malite iweghara ala ya, busokwa ya agha.
25 Taa, m ga-amalite itinye ụjọ gị na egwu gị n’ihu ndị dị iche iche nọ n’okpuru eluigwe, bụ́ ndị ga-anụ akụkọ banyere gị; ha ga-amakwa jijiji, nweekwa ihe mgbu n’ihi gị dị ka nke a na-enwe mgbe a na-amụ nwa.’+
26 “M wee si n’ala ịkpa Kedemọt+ zigara Saịhọn+ eze Heshbọn ndị ozi ka ha gwa ya okwu udo,+ sị,
27 ‘Ka m gafere n’ala gị. Ọ bụ naanị n’okporo ụzọ ka m ga-aga. Agaghị m ahapụ ya gaa n’aka nri ma ọ bụ n’aka ekpe.+
28 Nri ị ga-eresị m eresị ka m ga-eri; ọ bụkwa mmiri ị ga-eresị m eresị ka m ga-aṅụ. Ọ bụ naanị kwe ka m jiri ụkwụ m gafere,+
29 dị nnọọ ka ụmụ Isọ ndị bi na Sia+ nakwa ndị Moab+ bi na Aa si meso m, ruo mgbe m ga-agafe Jọdan banye n’ala ahụ Jehova bụ́ Chineke anyị na-enye anyị.’+
30 Ma Saịhọn eze Heshbọn ekweghị ka anyị si n’ala ya gafere, n’ihi na Jehova bụ́ Chineke gị kwere ka mmụọ ya sie ike+ nakwa ka obi kpọọ ya nkụ, ka o wee nyefee ya n’aka gị dị nnọọ ka ọ dị taa.+
31 “Jehova wee sị m, ‘Lee, amalitewo m inyefe Saịhọn na ala ya n’aka gị. Malite iweghara ala ya.’+
32 Mgbe Saịhọn pụtara, ya na ndị ya niile, ibuso anyị agha na Jehaz,+
33 Jehova bụ́ Chineke anyị nyefere ya n’aka anyị,+ anyị wee merie ya+ na ụmụ ya ndị ikom nakwa ndị ya niile.
34 Anyị wee weghara obodo ya niile n’oge ahụ ma bibie+ obodo ọ bụla, gbuokwa ndị ikom na ndị inyom na ụmụntakịrị. Ọ dịghị onye anyị hapụrụ ndụ.
35 Ọ bụ naanị anụ ụlọ ka anyị chịkọọrọ, tinyere ihe anyị kwatara n’obodo ndị anyị weghaara.+
36 Malite n’Aroa,+ nke dị n’akụkụ iyi ndagwurugwu Anọn, nakwa obodo nke dị na ndagwurugwu ahụ, ruo Gilied, e nweghị obodo nke mgbidi ya dị elu nke na anyị enweghị ike ịbanye ya.+ Jehova bụ́ Chineke anyị nyefere ha niile n’aka anyị.
37 Ọ bụ naanị na i jerughị ala ụmụ Amọn+ nso, bụ́ akụkụ dum nke iyi ndagwurugwu Jabọk,+ i jerughịkwa obodo ndị dị n’ógbè bụ́ ugwu ugwu nso, ma ọ bụkwanụ ebe ọ bụla nke Jehova bụ́ Chineke anyị nyere iwu banyere ya.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D5%26Chapter%3D2%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl